Howl-galka Qaramada Midoobay ee Soomaliya oo waqtiga loo kordhiyay – Radio Daljir
Maajo 27, 2015 3:12 b 0
Arbaco, May 27, 2015 (Daljir) — 15-ka xubnood ee Golaha Ammaanka ee QM ayaa u codeeyey in xilliga loo kordhiyo Ergadda QM ee ka hawlgala Somalia, iyadoo ay Somalia cagra saartay Tubta Soo-kabashadda Siyaasadda iyo Ammaanka oo soo hagaagayo.Goluhu waxay u codeeyeen in Hawlgalka (UNSOM) loo kordhiyey muddada, tan iyo inta laga gaarayo bishha August 7-da ee sannadkan.
Golaha Ammanka ee QM, waxay sheegeen inay xushmeynayaan Madax-bannaanida, Xorriyadda Siyaasadeed, Midnimadda iyo Xuduudka Somalia.
Goluhu waxa uu tilmaamay inay QM iyo Ururka Midowga Afrika (AU) dib u eegi doonaan sidii loo sii wadi lahaa Hawlgalka Ciiddanka Nabad-ilaaliyayaasha Afrika ee AMISOM.
Golaha Ammaanka ee QM waxay ugu baaqeen QM iyo Ururka Midowga Afrika ee AU inay dejiyaan qorshooyinka Tallaabooyinka labaad ee Hawlgalka Milliteri ee ka dhanka ah Alshabaab.
Xafiiska QM ee Somalia (UNSOM) waxaa la asaasay bishii June 3-dii ee sannadkii 2013-kii, kadib, markii uu Xoghayaha Guud ee QM, Ban Ki-moon talo ahaan u soo jeediyey arrintaasi bishii May ee isla sannadkii 2013-kii.
Golaha Ammaanka ee QM ayaa xilligaasi u codeeyey Xilli-hawleedka Xafiiska UNSOM oo ah muddo 12 bilood.Xafiiska UNSOM ayaa loogu talagalay inay DFS ka taageeraan Nabadda iyp Dib-u-heshisiinta.